Huawei P30 Pro na-enweta akara kacha mma site na DxOMark | Gam akporosis
DxOMark bụ ụlọ ọrụ ewepụtara iji nwalee igwefoto ama ama inye akara. Taa, anyị amaraworị na ọ ka nyere Huawei P30 akara kachasị elu iji tinye ya n'ọnọdụ mbụ megide ọdụ ndị ọzọ dịka Galaxy S10 na nke yiri ka ọ bụ enweghị mmeri Pixel 3.
Anyi aghaghi ime ka o doo anya na anyi na-acho ulo oru obere nke nta jisiri ike zoro ezo n'ime atụmatụ nke ọtụtụ ụdị ya mere, na mberede ma ọ bụ na ọ bụghị, ha na-amalite nyocha ha otu ụbọchị dị ka ngosipụta ha dị elu. Maka nke a, ị ga - ewere akara DxOMark na nnu.
Hụ Richard Yu na-etu ọnụ maka ịdị mma nke foto nke Huawei P30 Pro site na iji DxOMark bụ ile ya anya, mana ka ọ bụrụla ejiji, ọ bụ ihe ọ bụ. Huawei P30 Pro abịawo nweta akara nke ihe 112 ịkwaga na Mate 20 Pro ma ọ bụ Galaxy S10 +.
Mara Huawei P30 ugbua, ya igwefoto 40MP ya na oghere f / 1.6, DxOMark toro otuto ikike nke ọnụ iji chekwaa nkọwa mgbe ị na-ejide ihe oyiyi na mbugharị na ihe ọ ga-abụ iji dozie ọkwa zuru ezu nke nkọwa yana ikpughe mgbe anyị nọ n'ọnọdụ dị ala.
N'etiti adịghị mma isi anyị nwere ike ikwu banyere otú obere ọ bụ na ihe P30 Pro na-egosi ubé eke na mbara igwe na agba mgbe anyị na-ekwu maka ọnọdụ kacha mma iji see foto: n’ehihie; olile anya na ha dozie ya na nwelite. Ihe ọzọ na - adịghị mma bụ ihe onyonyo onyonyo nke nwere oke oke ike.
Companylọ ọrụ a na-ekwukwa banyere omume ọma na uru nke nkwụsi ike mgbe ị na-edekọ vidiyo na ihe bụ autofocus na oke ọsọ. Ọ na-emekwa ka o doo anya na e nwere ezigbo ihe dị iche na ịgba otu vidiyo n’ime ụlọ gaa na nke ehihie; ọ bụ ezie na ọ bụ ihe anyị hụburu na mobiles ndị ọzọ.
Thatbụ na ọ nwere ike, DxOMark amaola ikpe site na ya prism na kwes supposedr "" ebumnobi "itinye Huawei's P30 Pro na elu nke ụlọ mmanya ahụ. Ugbu a ọ ga-adị mkpa ịhụ Google Pixel 4 ọhụrụ ahụ nke ga-abụ onye dethrone ya ma ọ bụrụ na Nkọwa 10 nke Samsung adịghị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » DxOMark na-enye akara kachasị na Huawei P30 Pro